आर्थिक Archives - Riddle Nepal
सरकारी जागिर छोडेर किबि खेतीमा जमेको सफल जोडी, लाखौंको आम्दानी ३० जना युवालाई रोजगारी
santosh Sep 25, 2018 0
डेरी उद्योग: तीस हजार युवालाई रोजगारी, २० अर्ब लगानी , दैनिक ५० हजार…
नेपालीले हेला गरेको यो नेपाली जुत्ताको ब्राण्ड बिदेशमा यस्तो डिमाण्ड
आजदेखि के केमा कर बढ्यो ? अब वर्षमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले…
बरु यस्तो तरिकाले धान रोपाइ गर्ने कि ? नेपालमा पहिलोपटक मेसिनबाट…
Uncategorized अन्तराष्ट्रिय अन्तर्वार्ता आस्था/धार्मिक खाडी खेलकुद धार्मिक
होन्डाको अर्को स्कुटर फोर्जा १२५, कती पर्ला नेपालमा यसको मूल्य ?
santosh Jun 23, 2018 0
पछिल्लो समय नेपालमा होन्डा कम्पनीका बाइक र स्कुटरहरु धेरैनै लोकप्रिय छन् । खासगरी सहरी क्षेत्रमा बाइक भन्दा होन्डाका स्कुटरको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । होन्डाका डियो, एभिएटर र एक्टिभा आई स्कुटर हाल नेपालमा रहेका छन् । यी मध्ये होन्डाको…
कतारी, साउदी रियाल, रिंगिट, दिर्हाम र दिनारको मूल्य बढ्यो
santosh Jun 11, 2018 0
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ७२ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ८८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८५ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ७५ पैसा छ । युएई…
सिक्लेसदेखि हिमालको फेदीसम्म केबलकार सरर ! डेढ १ अर्ब लागतमा यस्तो बन्दै छ अब केबलकार
santosh Jun 9, 2018 0
२६ जेठ, पोखरा । कास्कीको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसदेखि अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको कोरीसम्म केबलकार निर्माण सम्भव देखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले केबुलकार सञ्चालन गर्ने मादी गाउँपालिकाको योजना उपयुक्त र सम्भव भएको देखाएको हो । चुनाव जितेलगत्तै…
यसरि देशैभर घट्यो घरजग्गा कारोबार
santosh Apr 11, 2018 0
काठमाडौं । देशैभर घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । सरकारले नयाँ प्लटिङमा गरोक लगाएपछि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर महंगो भएपछि घरजग्गाको कारोबार घटेको हो । घरजग्गाको कारोबार घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा…